DF oo ku guuleysatay dib-u-eegista koowaad ee Barnaamijka ECF | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo ku guuleysatay dib-u-eegista koowaad ee Barnaamijka ECF
Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay barnaamijka ECF oo suurta gelinaya in caawinaad dhaqaale la siiyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay'adda lacagta Adduunka ee IMF ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay dib-u-eegista koowaad ee barnaamijka ECF oo ah barnaamij taageero gaar ah lagu siiyo dalalka caqabaha kala kulma bixinta deymaha lagu leeyahay.
IMF ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinkii looga baahnaa ee dib u habeynta iyo fulinta waxyaabihii looga baahnaa, taasoo keentay in ay ku guuleysato maanta, soona gaarto heerka barnaamijka ECF uu suurta gelinaya in la siiyo caawinaad dhaqaale.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu hoos u dhac weyn ku yimid kadib lixdii bilood ee la soo dhaafay sababo la xiriiro Daadadka roobabka, Ayaxa oo xaalufiyay dhul beereed balaaran iyo COVID-19.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wadahalo dhanka Internaka ee muqaalka ay wada yeesheen masuuliyin ka socsotay IMF iyo Dowladda Soomaaliya, kaasoo looga hadlayay dib u eegista lagu sameeyey herarka dib u habeynyta Maaliyada iyo fulinta waxyaaba lagu heshiiyey.